Pyae Phyo (MMiTD): ♪ ကွန်ပျူတာပေါ်မှ Online Video များ ကြည့်မရခြင်း၊Download ဆွဲမရခြင်း ♫
♪ ကွန်ပျူတာပေါ်မှ Online Video များ ကြည့်မရခြင်း၊Download ဆွဲမရခြင်း ♫
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Online Video တွေ ကြည့်မရ ၊ ဒေါင်းမရတာလေးတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင် စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်...။
အရင်က Online Video တွေ ကြည့်ရတာ ၊ ဒေါင်းရတာအဆင်ပြေနေပြီး အခုမှ အဆင်မပြေတာမျိုးဆိုရင်တော့ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Browser (သို့မဟုတ်) Adobe Flash Player တစ်ခုခုက Update ဖြစ်သွားလို့ပါ.။
အင်တာနက်နှင့် အမြဲချိတ်ဆက် အသုံးပြုနေတာဆိုရင် Browser တွေကို Update လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်... Browser နှင့်အတူ Adobe Flash Player ကိုလည်း Update လုပ်ပေးရပါတယ်။
လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Mozilla Firefox Browser နဲ့ ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်......
အရင်းဆုံး Browser ကို Up To Date ဖြစ်အောင် Update လုပ်ပေးရပါမယ်...
Update လုပ်ဖို့အတွက် ပုံလေးတွေမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း နံပါတ်စဉ်အလိုက် နှိပ်ပေးပါ...
အပေါ်က Firefox Browser ပုံကတော့ Up To Date ဖြစ်နေတာပါ.. တကယ်လို့ Update မဖြစ်သေးရင် သူ့ဖာသာသူ အလိုလျှောက် Download ဆွဲသွားပြီး Update လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်... အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကြာတတ်ပါတယ်...
အရမ်းကြာနေလို့ အပေါ်ကအတိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...။
ပြီးရင် Firefox Browser ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ... (ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပေးပါ)
Firefox Browser ပြန်ပွင့်လာရင် ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီး Adobe Flash Player နဲ့ တခြား Plugin တွေကို Update လုပ်ပေးပါ...
Flash Player Install လုပ်တဲ့အခါ Error တစုံတရာတတ်ခဲ့ရင် ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီး Flash Player Uninstaller ကို ဒေါင်းယူပြီး Double Click နဲ့ Run ပေးပါ...
ပြီးရင် ဒီ Adobe Flash Player နှစ်ခုစလုံးကို Flash Player 21 for Internet Explorer ၊ Flash Player 21 for Firefox Browser ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပေးပါ။
(Flash Player Install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဖွင့်လက်စဖြစ်တဲ့ Browser တွေ အားလုံးကို ပိတ်ထားပြီးမှ Install လုပ်ပါ)
နောက်ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်တတ်လေးတစ်ခုကတော့ Internet Download Manager (IDM) ပါ.... Browser Update ဖြစ်သွားရင် Video တွေဒေါင်းဖို့ Download This Video / Download This Audio ဆိုတဲ့ Popup လေး မပေါ်တော့ပဲ Video တွေ ဒေါင်းမရဖြစ်တတ်ပါတယ်..။
Internet Download Manager (IDM) မရှိသေးသူတွေကတော့ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး နောက်ဆုံး Update Version ကို ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
IDM Update Version တွေကို ဒီနေရာမှာ Update ထွက်တိုင်း တင်ပေးနေပါတယ်..။ (No Serial Key , Patch Or Crack Need Just Install)
အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင် ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် အောက်ကပုံလေးတွေမှ နံပါတ်စဉ်အတိုင်း နှိပ်ပြီး Install လုပ်ပေးလိုပ်ပါ...
ပြီးရင် Firefox Browser ကို Restart ချပါ (ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ)
Youtube မှာ ဝင်ပြီး စမ်းကြည့်ည့်ပါ... တကယ်လို့ Download This Video / Download This Audio ဆိုတဲ့ Popup လေး မပေါ်သေးဘူးဆိုရင်... အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ပေးပါ...
Firefox Browser မှာ မြန်မာစာ မမှန်တာမျိုးဖြစ်နေရင်တော့ ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ မြန်မာစာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင် စုစည်းပေးထားပါတယ်..။
နောက်တစ်ခုကတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့အခါ AD ကြော်ငြာတွေ တတ်တတ်နေလို့ အာရုံနောက်နေတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး Add to Firefox နဲ့ Add ပေးလိုက်ပါ...
မှတ်ချက် ။ ။ တစ်ခုခု Download ဆွဲစရာရှိလို့ နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ
တချို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေက ဒီ AD Blocker ကို Disable လုပ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်... မဖြစ်မနေလုပ်ပေးရတတ်ပါတယ်... Disable လုပ်မပေးရင် ရောက်နေတဲ့ နေရာကနေ ဆက်သွားလို့မရတတ်ပါဘူး.. အဲဒီအခါ....
ပုံပါအတိုင်း ခေတ္တ Disable လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.....
ပြီးရင် Unpause ပြန်ထားပေးလိုက်ပါ...။
အားလုံး အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်....
အမျိုးအစား: Knowledge , Online Movies , နည်းလမ်းများ